Depioten’ny « fanovana » : Mba migrevy ve ny zanakareo? -
AccueilRaharaham-pirenenaDepioten’ny « fanovana » : Mba migrevy ve ny zanakareo?
04/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Falifaly sy miramirana èry ireo mitonona ho “solombavambahoakan’ny fanovana” mahita ireo mpianatra avy amin’ny sekolim-panjakana sasany namonjy ny kianjan’ny 13 Mey nilanja sora-baventy. Ny lisea Nanisana moa no isan’ny mpitarika tamin’izany. Tsy tonga ho azy teny ireny mpianatra ireny fa tsy maintsy nisy nahazo baiko, ary mazava ho azy fa avy amin’ny MAPAR sy ny TIM tahaka ny fomba fanao teto hatramin’izay ihany.
Miantefa any amin’ireto mitonona ho solombavambahoakan’ny fanovana ireto anefa ny fanontaniana: “mba migrevy isan’andro eo amin’ny kianjan’ny 13 Mey ve ny zanakareo ireo sa manohy ny fianarany tsara any ambadika any, manomana ny fiatrehana ny fanadinana?”. Mialohan’ny hitarihan’izy ireo ny zana-bahoaka handao ny sekoliny mantsy aloha dia tokoa hasehon’ireto depiote ireto ho hitam-bahoaka isan’andro eny amin’ny 13 Mey ny zanak’izy ireo fa tsy zana-bahoaka no atao sorona lava izao. Mazava ho azy fa tsy hisy mihitsy izany satria tsy misy mianatra any amin’ny sekolim-panjakana toa ny EPP, CEG sy lisea ny zanak’izy ireo fa any amin’ny sekoly tsy miankina avo lenta manaraka ny programa vahiny izay tsy higrevy velively mihitsy.
Tsy tokony hohadinoina ihany koa fa mandray karama an-tapitrisany isam-bolana ireto mitonona ho solombavambahoakan’ny fanovana ireto, izany hoe, manana antenaina hatrany izy ireo na tsy hiasa aza. Inona no tiana hiaviana amin’izany? Ny asa fiveloman’ny vahoaka no voatohintohina amin’izao fanonganam-panjakana izao fa ny karaman’izy ireo kosa tsy maintsy raisiny isam-bolana, ary na sanatria aza ka mikatso ny fampihodinana ny asam-panjakana efa manana antenaina izy ireo fa ny mpiasam-panjakana no ho sahirana raha toa ka tsy tafavoaka ny karama vokatry ny fampikatsoana ny raharaham-panjakana.
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny biroa foiben’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara na HVM, etsy Antanimena, ny fivoriamben’ireo mpandrindra sy ny birao iraisain’ireo kaominina sy ny “coach” manerana ny Faritra 22 eo anivon’ny antoko eto Madagasikara. Saika ...Tohiny
KMMR25 : Miantso ny vahoaka tsy hanaiky hala-bato